ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: အချစ်နှင့် သူငယ်တန်းဖတ်စာ
ဖွင့်ဟချက်။ ။ သူငယ်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ပြဌာန်းစာအုပ် ထဲမှာပါတဲ့ စကားလုံးလေး တချို့ကို ယူပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရေးဖွဲ့ပါတယ်..။ ကျွန်မ ချစ်ရတဲ့ “မ” မမနော် ကျေနပ်နိုင်ပါစေ.. အချိန်အကြာကြီးနေမှ ဆပ်နိုင်တဲ့ အကြွေးလေးမို့ အတိုးများများ တိုးမယူရန် အားလုံး၏ ရှေ့တွင် အသိပေးကာ တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း.... :P
အချိန် 8:44 PM
အတွေးရော အရေးရော သဘောကျပါကြောင်း ဟိဟိ
ရေးတတ်လိုက်တာနော်.. မ တို့များ.. ချွဲတတ်တာလည်း လွန်ပါ့..
သူဖတ်ပြီးရင် ဘယ်လိုများ နေမလဲဟင်..
ဟိဟိ အဲလို အတုခိုးပြီး ရည်းစားစာလေးတစ်စောင်လောက်တော့ ရေးဦးမှပါ.. ရေးပြီးရင် သေတ္တာလေးထဲ သိမ်းထားလိုက်မယ်လေ..
နုနုရွရွလေး ရေးထားတဲ့ ဖတ်စာလေးကို
A to Z ဟာ ဒီလောက်ကဗျာဆန်တတ်မှန်း မသိခဲ့ရပါလားကွယ်.. သိပ်တော်တဲ့ ချစ် "မ" ... မွနော်း)
ပတ္တလားလေးနဲ့ ချစ်မိုးကြီး သီချင်းလေး ဆိုပြလိုက်ရောပေါ့ ခင်လေးရယ် .. ပြောထားသားနဲ့ ...း))
အတွေးကောင်းသလို အရေးလည်း ကောင်းတယ် စိတ်ကူးကလည်းဆန်းတယ်ဗျ လေးစားအားကျမိပါတယ်။
လာချောင်းတာ တီငယ်။ သားငယ်ထင်တဲ့အတိုင်း....
X ကိုဝါးးးးးးချပါတယ်..။ အဟိ။ မကျေနပ်ပါ။
အော် ..ပြန်ဦးမလို့မေ့ပြီး ဖတ်တော့ဖတ်ပြီး ပေါ့။ ဘယ်လိုပြောရမလည်းဆိုတော့ ... တွေးတက် ရေးတက်တဲ့သူတွေ တော်တဲ့သူတွေ ရေးတော့လည်း ကောင်းတာပါပဲလေ...:)။
ချစ်မလေး ... ချစ်စရာကောင်းအောင်ရေးတတ်လို့
( မမအိန္ဒြာကို မှီးတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ရင်ထဲက စကားတွေ တူသွားတာပါ :P :P :P)
ဟဟ မိုက်နေရောဘဲ တီငယ်ရာ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမို့ ပေါ့ပေါ့လေးဖတ်ပြီး ပါးပါးလေး ပြုံးမိပါတယ်...စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ မခင်လေးငယ်ရေ...
T Nge yae...,
အရေးလည်း ကောင်းတယ် ချစ်စရာလည်း ကောင်းတယ် အားကျလိုက်တာ... :P
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ စာလေးတွေကို ချစ်ငွေ့ လေးတွေပါအောင် လှလှလေးေ၇းပေးနိုင်တယ်နော် ...မျက်လုံးထဲမှာ ပာန် တွေအကုန်လုံးမြင်လို့ ...မ အတွက် ချစ်စရာပေါင်းများစွာ သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ သူလေးနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ စာလေးကို ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ သိရတယ် အနားမှာ.....၊ X လေးကို ကြိုက်တယ် ...း)။။
A to Z ကို စာကြောင်းတကြောင်းပြီးတကြောင်း
အချစ်သူငယ်တန်း ဖတ်စာကို ပြုံးပြုံးလေး လာသင်ပါတယ်... အဲလေ.. လာဖတ်ပါတယ်....
Kaung Kin said...
တကယ် ချစ်စရာလေး... :)
သူငယ်တန်း ဖတ်စာက နည်းနည်းတော့ အဆင့်မြင့်သားနော်.. ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတယ်..
သူငယ်တန်းဖတ်စာ က ဘွဲ့ရတွေအတွက် ပြဌာန်းလို့ရပြီ :P
ဟိဟိ... ဆိုတော့ အင်းးး..!!!!! :P
ရေးပြီးမှတော့ သေတ္တာထဲ ထည့်စရာလား
ဘယ်သွားသွား နောက်ကနေလိုက်ပေးရောပေါ့ :P
ခင်လေးက ချစ်မိုးကြီး ဆိုမလို့ပါပဲ.. သူက ပတ္တလားတီးဖို့နေနေသာသာ မြင်တောင် သေချာမြင်ဖူးရဲ့လားမသိတော့ ... ဟီးးး
အားကျစရာလား စာသင်နေတာကို... ;)
အမြဲပဲ အားပေးတတ်တာလေးတွေ ကျေးဇူးပါရှင်...
ခင်လေး ပင်ပမ်းမှာ စိုးတယ်ပေါ့ .. :D
သူငယ်တန်းဖတ်စာ လာဖတ်တယ်ပေါ့.. :P
အထူးချစ်လေး အတွက် ကျေးဇူး..း)
တီငယ် မလိမ္မာတာ ပြောစရာလားလို့... ဟွန်းးး)
ပါးပါးလေး ပြုံးမိတယ်ဆိုတော့... ဘီလိုလေးပါလိမ့်..!! :P
တီငယ် ပြောထားတယ်လေလို့.. အားကျစရာလား..!! :P
:P :) :D ပါ။
အစဉ်အမြဲ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ အားပေးတတ်လွန်းလို့ ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ် ... ပေးတဲ့ဆုလေးနဲ့ လည်း ပြည့်ဝ ပါရစေ...း)
စာလာကျက်တာ စာကော ရသွားရဲ့လား..!!း))
အပြုံးလေး အတွက် ကျေးဇူး.. :-)
တကယ်ချစ်စရာလေး လို့ ရေးပေးသွားတာလေးကိုက
ပျော်လွန်းလို့ တကယ်ချစ်စရာလေး.. :)
ကို..(or) မ.. သိင်္ဂါကျော် ရေ...
ကွန်မန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်...း))
အဲ့လို ဂျေက်တွန်းရဝူးကော... :P :P
သူငယ်တန်း ဖတ်စာကလည်း မြင့်လိုက်တာ မမရာ... ဘွဲ့ရပြီးသာသူတောင် နားမလည်ဘူး။း)) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီလောက်ညံ့မှန်း ခုမှသိတော့တယ်။
မမခင်လေးရဲ့ အရေးအသားတွေကတော့ ရှယ်ပဲ။ သေသေချာချာ သင်ယူသွားပါတယ်။
အမ မရောက်တာ အတော်ကြာခဲ့ပေါ့..။
ဖတ်သွား.... ခံစားသွား၏.. အားကျစရာ အတွေးကောင်းများပေါ့..။
အမယ်ကြီးက ဒီလိုကျတော့လဲ နုရွနေပါလား။